लामो प्रतीक्षापछि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनमा, ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तो सेवा – Health Post Nepal
लामो प्रतीक्षापछि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनमा, ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तो सेवा
२०७६ जेठ ३१ गते १६:११
चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीसेवा सुरु गरेको छ । फार्मेसीका लागि कर्मचारी नियुक्त गरेको ८ महिनापछि अस्पतालले सेवा सुरु गरेको हो ।
बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको फर्मेसीले बिरामीलाई निकै राहत दिने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि अस्पतालको बाहिरी भागमा साझाको फार्मेसी सञ्चालनमा थियो ।
अस्पतालका डा. आचार्यका अनुसार अन्य फार्मेसीमा भन्दा अस्पतालको फार्मेसीबाट बिरामीले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि किन्न पाउनेछन् । उनले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र थपेर औषधि विक्री गरिने जानकारी दिए ।
विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसेवा, औषधिको खरिद प्रक्रियालगायत तयारी पूरा नभएका कारण तोकिएको समयभन्दा फार्मेसी सञ्चालन गर्न केही ढिला भएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनका लागि गत कात्तिकमै १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेर तयारी बढाएको थियो । गत चैत महिनासम्म फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने योजना अस्पतालको थियो । तर, यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिको ८ महिनासम्म पनि फार्मेसी सञ्चालनमा आउन नसक्दा उद्देश्यअनुरूप सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउनबाट बिरामी वञ्चित बनेका थिए । अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनका लागि अधिकृतस्तरका २ र अन्य ८ कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएलगत्तै अस्पतालले औषधि खरिद गरेको थियो । करिब १३ करोडबराबरको औषधि खरिद गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार फार्मेसीमा हाल एक हजार प्रकारका औषधि उपलब्ध छन् ।
३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तो, २४सै घण्टा सेवा
अस्पतालमा आउने बिरामीले महँगो केमोबाट आफू ठगिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि महँगो हुने भएकाले अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा बिरामी निकै लाभान्वित हुने निर्देशक डा. आचार्यको भनाइ छ । अस्पतालको फार्मेसीमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा बिरामीले औषधि पाउने उनले जानकारी दिए । अस्पतालको फार्मेसी २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने निर्देशक डा. आचार्यको भनाइ छ ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पतालका रूपमा लिइन्छ । अस्पतालमा नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत ठूलो संख्यामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । हाल दैनिक ६ सय ५० देखि ८ सयसम्म बिरामीले अस्पतालबाट ओपिडीसेवा लिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको साधन–स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी बिरामीको चाप दिनहुँ थपिँदै जाँदा अस्पतालका सबै सेवामा ढिलासुस्तीलगायत समस्या झेल्नुपरिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ । अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा तथा पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको क्यान्सररोगका कारण बिरामीको अत्यधिक चाप हुँदा समयमा उपचार दिन नसकिएको तथा बिरामीले चौतर्फी लाइन झेल्नुपरेको अस्पतालको भनाइ छ ।